Isbahaysiga Galay Xisbiga WADDANI-W/Q. Cabdiraxman Cali Ducaale | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Isbahaysiga Galay Xisbiga WADDANI-W/Q. Cabdiraxman Cali Ducaale
W/Q. Cabdiraxman Cali Ducaale
Isbahaysiga dhawaan galay xisbiga Waddani, haddii aan taariikhda dib u raacno waxay ahaayeen koodii diiday xisbiga KULMIYE iyagoo ajande gaar ah lahaa siyaasad ahaana ka tasoobay xaggii dadweynaha iyo dawladda labadaba. Hadaba arintani waxay I xasuusisay sheeko Ku qornayd kitaab lagu dhigan jirey dugsiyada oo la odhan jirey (CAFAARIIT AL-LUSUU) cafaariidii tuugta ahayd. Waxan ay sheekadaasi ahayd Sudan hoos Ku qoran; Qaar ka mid ah xayawaanka dadka la nool oo kala ahaa Dameer, Diig, Bisad iyo Ey ayaa dadkii haystay iska eryeen markii ay qaban waayeen shaqadii looga baahnaa. Intii ayaa ku kulantay kayn, markii ay nasteen ayaa ay is waraysteen mid walbana waxa uu ka waramay waxa laga soo eryay.
Dameerkii waxa uu yidhii waan daalay oo waxba waan qaban kari waayey sidaas ayaa la igu soo eryay
Eygii waxa uu yidhi gurigii aan ilaalinayey ayaa nin tuug ahi usoo dhacay markii ann is idhi celi ayuu hilib iisoo tuuray intii aan hilibkii cunayay ayaa uu gurigii xaday sidaas ayaa la igu soo eryay
Bisada gurigii aan joogay ayaa uu jiirkii ku soo batay anna waxba waan celi kari waayey sidaas la igu soo eryay
Diigii waxa uu yidhi subaxii ayaan hadli waayay oo dadkii salaadii u kicin waayay sidaas ayaa la igu soo eryay
Markii waraysigii dhamaaday ayaa lagu heshiiyey in ay isbahaystaan oo cadawga si wada jir ah iskaga celiyaan. Iyaga oo aan dhawr maalmood waxaba cunin ayaa ay arkeen guri kayntii ka dhex itiimaya, eygii iyo dameerkii ayaa loo diray in ay soo hubiyaan. Waxay arkeen oday gaboobay iyo islaan kaliya oo cashaynaya cunto badanina hortaalo. Waxa ay markiiba go’aan ku gadheen in ay odaygaas iyo islaanta ka eryaan guriga wixii yalaana ay iska cunaan guri ay uu hoydaana ka dhigtaan.
Gurigii ayay tageen daaqaadihii ayaa uu midba mid koray oo ay qaylo dheer ku dhufteen, odaygii iyo islaantii orod ayay kaga baxeen gurigii waxay u qateen in cafaariid iyo jiman ay soo weerartay guriga kana qaateen dibna uma ay soo noqon.
Hadaba sheekadani waxa ay u eg tahay tan ay isbahaysigu ka galay xisbiga Wadani, dadwaynaha ayaan u daayay in ay ka faalodaan kana doodaan in isbahaysigu wax u kordhinayo iyo in ay odayga iyo islaanta meesha ka eryayaan.